Indlu epholileyo kufutshane nolwandle - I-Airbnb
Indlu epholileyo kufutshane nolwandle
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKarin
UKarin ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-cottage epholileyo kwindawo ethandekayo kuphela i-100 yeemitha ukusuka elunxwemeni.
Wamkelekile / Wamkelekile
* skrolela ezantsi kwinguqulelo yesiNgesi / yesiJamani
Indlu epholileyo ekufutshane nolwandle oluthandekayo olunosapho. Ummandla umema ukuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile kwindalo entle yeSønderjyske kunye nedaseri egadini naselwandle.
Indlu iyasebenza inamagumbi okulala ama-2, i-1 enebhedi ephindwe kabini kunye ne-1 enebhedi ezi-2 zomntu omnye. Igumbi lokuhlambela lineshawa kunye nokufudumeza okuphantsi, igumbi lokuhlala elinekhitshi elivulekileyo kunye neendawo ezi-2 ezinefenitshala yegadi kunye ne-barbecue.
Kukho umatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba endlwini.
Ukuba uzisa abantwana, sinesihlalo esiphezulu kunye ne-cot siyavuya ukwenza ukuba sifumaneke ngexesha lokuhlala kwakho
Zive ukhululekile ukusixelela ngezinto onomdla kuzo xa ubhukisha ukuze sifumane inkuthazo yendawo, ukuba uzisa abantwana, sine-LEGO / PLAYMOBIL / imidlalo kunye neencwadi ezinokudlalwa ngexesha lokuhlala.
Indlu yeholide epholileyo kufuphi ne-familyfriendly beach. Indawo ilunge kakhulu kuzo zombini iihambo ezinde kunye nokukhwela ibhayisekile kunye nokuphumla egadini okanye elunxwemeni.
Indlu ifakwe kakuhle inamagumbi amabini okulala, igumbi eli-1 elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi eli-1 elinebhedi ezi-2 ezingatshatanga. igumbi lokuhlambela lineshawa kunye nomgangatho wokufudumeza. Igumbi lokuhlala elinekhitshi elivulekileyo kunye nendawo yokutyela eyahlukileyo. 2 amathala anefenitshala kunye nebarbecue. Le ndlu inezinto ezininzi ezintle ezifana ne-dishwasher, umatshini wokuhlamba, i-wifi kunye nomabonwakude.
Ukuba uzisa abantwana, sinesihlalo esiphezulu kunye nebhedi yomntwana esiya kuyibeka ngovuyo endlwini ukuze uyisebenzise ngexesha lokuhlala kwakho.
Sihlala kufutshane kwaye siya kukuvuyela ukwenza ukuhlala kwakho kube lula kwaye kube mnandi kangangoko, nceda usivumele ngoku ukuba unomdla okhethekileyo okanye izinto ozonwabisa ngazo, wamkelekile ukuba usebenzise isikhephe sethu sokubheqa okanye ukuba uzisa abantwana siyakukuboleka ngovuyo. I-LEGO / PLAYMOBIL / imidlalo kunye neencwadi onokudlala ngazo ngexesha lokuhlala kwakho nathi.
Ikhaya leeholide elipholileyo kumgama nje we-100 leemitha ukusuka kulwandle olulungele usapho. Jabulela indalo yaseDanish entle ngeenyawo okanye ngebhayisekile okanye uphumle egadini okanye elunxwemeni.
Le ndlu inamagumbi amabini okulala, enye inebhedi ephindwe kabini enye ineebhedi ezimbini zomntu omnye, igumbi lokuhlambela lineshawari kunye nokufudumeza okungaphantsi komgangatho, igumbi lokuhlala elinekhitshi elivulekileyo eline-dishwasher, umatshini wekofu, iketile kunye ne-toaster. Amathafa amabini anefenitshala yegadi kunye nebarbecue. Kukwakho umatshini wokuhlamba, iWi-Fi kunye neTV.
Ukuba uzisa abantwana bakho, sinesihlalo esiphezulu kunye nebhedi esivuyayo ukukunika yona ngexesha lokuhlala kwakho.
Sihlala kufutshane kwaye singathanda ukufaka isandla ekwenzeni iholide yakho ibe ntle kwaye iphumle, ukuba uzisa abantwana bakho, siyavuya ukukubonelela nge-LEGO / PLAYMOBIL / imidlalo.
Pensioneret gymnasielærer, kunstentusiast og rejseglad.
Vi lejer nu vores hyggelige sommerhus ud, så andre kan få glæde af det når vi og vores børn ikke selv bruger det.
* Dansk / Deutsch / IsiNgesi
Ekufikeni kwethu, thina okanye intombi yethu siya kube sisendlini kwaye sikwamkele kwaye siqinisekise ukuba uziva ukhululekile endlwini. Ngexesha leenyanga zasehlotyeni sihlala kwi-cottage yethu yesibini ngaselunxwemeni olufanayo kwaye apha uhlala wamkelekile ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho.
Inguqulelo yesiJamani: Ekufikeni kwethu, thina okanye intombi yethu siya kuhlala sikhona ukuze sikubulise size siqinisekise ukuba uqhuba kakuhle endlwini. Ehlotyeni sihlala kwenye indlu yethu yasehlotyeni elunxwemeni olufanayo, uhlala wamkelekile apha ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho.
Inguqulelo yesiNgesi: Ekufikeni kwakho uya kuhlala udibana nathi okanye intombi yethu ukuze inamkele kwaye ikunike ukhenketho lwendlu. Ehlotyeni sihlala kufutshane kakhulu kwenye indlu yethu yasehlotyeni kunxweme olunye, apha wamkelekile ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho.
Ekufikeni kwethu, thina okanye intombi yethu siya kube sisendlini kwaye sikwamkele kwaye siqinisekise ukuba uziva ukhululekile endlwini. Nge…